Semalt - सामग्री स्क्र्यापिंगको लागि के राम्रो छ?
सामग्री स्क्र्यापि विभिन्न साइटहरूबाट सामग्री निकाल्ने र संरचित, प्रयोग-गर्न-सजिलो ढाँचामा यसलाई भण्डारण गर्ने प्रक्रिया हो। अक्टोपार्से र सामग्री Grabber जस्तो एक राम्रो सामग्री स्क्र्यापि tool उपकरणको मूल्य उपेक्षित गर्न सकिदैन। हामी यी उपकरणहरू निर्दिष्ट र ठूलो मात्रामा सामग्री स content्कलन गर्न प्रयोग गर्न सक्छौं जुन प्रकृतिमा गतिशील हुन सक्छ। सामान्यतया, इन्टरनेटमा उपलब्ध डाटा अपठनीय र संरचनात्मक छ। राम्रो सामग्री स्क्र्यापिंग उपकरणले यसलाई एक संरचित, पढ्न योग्य र स्केलेबल ढाँचामा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ जसले गर्दा हामी सामग्री वा डाटालाई सजिलै हाम्रो आफ्नै साइटहरू वा ब्लगहरूमा प्रयोग गर्न सक्दछौं।
सामग्री Grabber विरुद्ध अक्टोपार्स:
डाटा म्यानुअल तरीकाले क्याप्चर गर्न र स्क्र्याप गर्न घण्टा लाग्छ, र तपाईं एक पटकमा बहु कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्न। जे होस्, दुबै अक्टोपार्से र सामग्री ग्रैबरले तपाईंलाई सामग्री स्क्र्यापिंग प्रक्रिया स्वचालित गर्न र समयको एक अंशमा डाटा क्याप्चर गर्न मद्दत गर्दछ।
यी डाटा स्क्र्यापिंग उपकरणहरूले विभिन्न वेबसाइटहरू र ब्लगहरूमा अन्तर्क्रिया गर्दछन् जसरी तपाईं वेब ब्राउजरसँग गर्नुहुन्छ। एक ब्राउजरमा वेब सामग्री प्रदर्शन को अतिरिक्त, दुबै अक्टोपार्से र सामग्री Grabber तपाईंको स्थानीय आवश्यकता अनुसार डाटा वा एक डाटाबेस डाटाबेस बचत गर्दछ।
तपाईं सजिलैसँग सामग्री स्क्र्यापिंग एजेन्टहरू कन्फिगर गर्न सक्नुहुनेछ र प्रत्येक एजेन्टलाई दैनिक, घन्टा, साप्ताहिक वा मासिक आधारमा अनुसूचित गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं इन्टरनेटबाट सही सामग्री भेला गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यबाद, यी दुबै उपकरणहरूले वेबबाट डाटा काट्छन् र संरचित फारममा सामग्री डेलिभर गर्दछन्। सामग्री Grabber ले ORACLE, MySQL, OLE DBE र SQLSever लाई समर्थन गर्दछ, जबकि Octoparse CSV, JSON, XML र Excel स्प्रेडशीटहरू जस्तै ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ।
तिनीहरू हामीलाई गतिशील साइटहरू लक्षित गर्न सक्षम गर्दछन् र AJAX- सक्षम वेबसाइटहरुबाट सामग्री स्क्रैप गर्न सक्दछन्। सामग्री Grabber यसको मेशिन लर्निंग टेक्नोलोजीको लागि राम्रोसँग परिचित छ, र अक्टोपार्ससँग तपाईंको काम सजिलो बनाउन अत्याधुनिक प्रविधि छ। यी सामग्री स्क्र्यापि tools उपकरणहरू संरचित डाटा स्रोतमा ईन्टरनेट रूपान्तरण गर्न सक्षम छन् र कर्पोरेसनहरू र व्यक्तिको लागि विभिन्न व्यापार अवसरहरू खोल्न सक्षम छन्।
सामग्री Grabber र Octoparse तपाइँको लागि के गर्न सक्दछ?
अक्टोपार्से धेरै जसो सामग्री स्क्र्यापिंग शक्ति प्रदान गर्दछ र सामग्री Grabber भन्दा सजिलो छ। यो उपकरण धेरै समय को लागी गरीएको छ र विश्वव्यापी रुपमा धेरै सन्तोषजनक उपयोगकर्ताहरु छन्। अर्कोतर्फ, सामग्री Grabber एक अपेक्षाकृत नयाँ उपकरण हो जुन गतिशील साइटहरूलाई लक्षित गर्न र उच्च स्तरमा कार्य गर्न डिजाइन गरिएको हो जुन अक्टोपार्सको उन्नत सुविधाहरू सँगै बन्डल गरिएको छ। अक्टोपार्से राम्रो छ वा सामग्री Grabber हो कि होइन यो भन्न गाह्रो छ।
यी दुबै उपकरणहरू महान भिजुअल स्क्र्यापरहरू हुन् र एक साधारण-क्लिक-क्लिक यूआई छ। प्रयोगकर्ताहरूले इन्टरनेट ब्राउज गर्छन् र अक्टोपार्से र सामग्री ग्रेबर प्रयोग गरी उपयोगी सामग्री स collecting्कलन गर्न डाटा तत्त्वहरूमा क्लिक गर्छन्।
वेब बोटहरू र माकुराहरू जस्ता सामग्री ग्रैबर र अक्टोपार्सेले तपाईंको वेब पृष्ठहरू सूचकांक बनाउन र तपाईंको साइटको खोज इञ्जिन स्तर निर्धारण सुधार गर्न सजिलो बनाउँदछ। यसका साथै, तपाईं यी उपकरणहरूलाई जटिल र गतिशील वेब पृष्ठहरूबाट सामग्री खोप्नको लागि निर्देशन दिन सक्नुहुनेछ, र तिनीहरू तिनीहरूको कार्यहरू तुरून्त र आरामसँग प्रदर्शन गर्नेछन्।
एक नजरमा, यी दुई सेवाहरू बीचको मुख्य भिन्नता तिनीहरूको मूल्य निर्धारण देखिन्छ। अक्टोपार्से प्याकेजहरू दुई मुख्य प्रकारहरूमा विभाजन गरिएका छन्: मानक ($))) र प्रोफेशनल ($ १9))। सामग्री Grabber पनि एक सशुल्क सेवा हो जुन तीन संस्करणमा आउँदछ, $99 to देखि २95 95। सम्म